August 8, 2020 – Xorriya Online
Somaliland iyo Shiinaha oo kala saxiixday heshiis muhiim oo dhinacyo badan ah ‘warbixin iyo sawirro’
Xorriya Online: Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in ay la saxiixatay dowladda Shiinaha heshiis iskaashi oo la xiriira dhinacyada ganacsiga, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka. Heshiiskan ayaa yimid, ka dib markii ay wafti ka socda Shiinaha oo uu hogaaminayo wakiiilka Shiinaha u qaabilsan Africa ay la kulmeen Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar […]
Bishii December sanadkii hore waxaa caalamka ka dilaacay Viruska Corona kaasoo gabi ahaanba dunida kala xiray sidoo kalana dhaqaalihii dhulka la galay asigoona abuuray dhibaato dhaqaale aad u culus. Hadaba tirada dhimashada caabuqa Coronavirus ee adduunka ayaa si isdaba joog ah kor ugu sii kacaya mudooyinkii ugu danbeeyay, iyadoo tirada dhimashada marka loo eego tirakoobyadii […]
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Safiir kuxigeenka dowadda Talyaaniga ee Soomaaliya danjire Tabio Massimo kaasi oo ay ka wada hadleen wax ka qabashada arrimaha fatahaada Beledweyne, waxaana Talyaaniga ay ogolaatay mashruucii in dhowaanba la sugayay ee ka hortagga Fatahaada oo ay ku baxeyso lix milyan oo dollar […]
Qaramada Midoobay iyo Beesha Caalamka ayaa walaac ka muujiyay Sharciga Galmada oo maanta la horgeeyay Golaha Shacabka, kaasoo dib loo celiyay. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo ka jawaabay xeerkaan ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin isku dayga miiska Guddoomiye Mursal u saaray Xeerkaan ku saabsan Galmada oo uu ku tilmaamay mid cusub. “Qaramada […]
Kenya oo diyaaradaheeda ka mamnuucday soomaaliya kadib go’aankii ka soo baxay dowladda Soomaaliya
Dowlada Kenya ayaa diyaaradaheeda ka mamnuucday Soomaaliya kadib go’aanka dowladda Soomaaliya ku diiday Qaadka Kenya ka imaan jiray . Kenya ayaa 8 dal oo ay Soomaaliya kamid tahay ka mamnuucday iney tagaan diyaaradaheeda ayagoona ku sababeeyay Covid-19 dartiis. Go’aanka Kenya ayaa imaanayo ayadoo maanta dowlada Federaalka Soomaaliya ay diiday in Qaadka Kenya Soomaaliya la keeno […]
Baarlamaaka Soomaaliya oo diiday xeer kahor imaanayo Diinta Islaamka iyo buuq badan oo ka dhashay
Baarlamaanka Soomaaliya oo gabi ahaanba diiday hindiso sharciyeedka la xiriira Galmada kaasoo maanta la horgeeyay. Ajendaha kulanka Xildhibaanada ayaa waxaa uu ahaa Mashruuc sharci ah oo ah Akhrinta Koowaad ee Hindise sharciyeedka Dambiyada la xiriira Galmada, kaasi oo laga doonayay inay Akhrinta Koowaad marsiiyaan. Xildhibaano ka hadlay furitaanka kulanka ayaa si cad u diiday mashruucaan […]
Dowladda Soomaaliya oo diiday keenista Qaadka Kenya iyo wafdi Kenyan ah oo Muqdisho ku sugan
Wafdi ka socday Kenya ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho si ay dowlada ugala hadlaan in dib loo furo qaadkii Kenya ka imaan jiray kaasoo horay Dowlada u joojisay. Wafdigaan oo qorshihiisa ahaa dib u fasixida qaadka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in qorshahooda uu diiday Madaxweyne Farmaajo ayadoo aanan wali la sheegin sababta Rasmiga ee […]
Halkee asal ahaan uu ka yimid “Scapegoating”. Waxaa jirta sheeko ama qiso caan ah oo la magac baxday aan rida dambiga usaarino (Scapegoating). Sheekadan ayaa ah in wax kasta oo dambi ah oo Yuhuuddu galaan loo saariyo ‘ri’ meel iska taagan kaddibna ridaas masaafuris lala beegsado oo dhul cidlo iyo ciirsi la’ ah lagu raacdeeyo, […]
Wararkii ugu dambeeyey qaraxii ka dhacay Muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac
Qarax xoogan kaasoo loosoo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xaruun ay ciidanka xooga dalka Soomaalia ku keeyihiin dhabarka dambe ee garoonka Stadium Muqdisho ee dagmada Warta Nabada. Wararka ayaa sheegaya in gaari nuuca loo yaqaano Noha oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu isku qarxiyay xerada ciidanka, Guutada 12-ka April. […]